October 2016 – Dhammadīpa
Posted on 29 Oct 2016 by Ashin Sopāka
“A person renowned for his bounty,
“Give! Give!” he says.
“Likeagreat storm cloud
“Having righteously gathered wealth
Whatever beings live in need.” Iti 75
“Yathāpi megho thanayitvā,
Thalaṁ ninnañca pūreti,
“Evamevaṁ idhekacco, puggalo hoti tādiso;
Dhammena saṁharitvāna, uṭṭhā­nādhi­gataṁ dhanaṁ;
Tappeti annapānena, sammā patte vanibbake”ti.
“အကြင်သူသည် အလှူခံအချို့တို့အား ပေးလှူ၏။ အလှူခံအချို့တို့အား မပေး လှူ၊ ထိုသို့ သဘောရှိသောသူကို ပညာရှိတို့သည် ကွက်ကျားရွာသော မိုးနှင့် တူသူဟု ဆိုကုန်၏။
“ထမင်းရလွယ်သည့် စကားကို ပြောတတ်သော အလုံးစုံသော သတ္တဝါတို့ကို သနားစောင့်ရှောက်တတ်သော ယောကျာ်းသည် နှစ်သက်ရွှင်လန်း ဝမ်းမြောက်သည်ဖြစ်၍ဖြန့်ကြဲပေးလှူတတ်၏။ ပေးလိုက်ကြပါကုန်၊ ပေးလိုက်ကြပါကုန်ဟု ဆိုတတ်၏။
“မိုးသည် ထစ်ကြိုးမြည်ဟည်း၍ ရွာပြီးလျှင် ရေဖြင့် စီးလျက်သာလျှင် ကြည်းကုန်းကိုလည်းကောင်း၊ ချိုင့်ဝှမ်းရာကိုလည်းကောင်း ပြည့်စေသကဲ့သို့ ဤအတူသာလျှင် ဤလောက၌ ထိုသို့ သဘောရှိသောအချို့ပုဂ္ဂိုလ်သည် တရားသဖြင့် စုဆောင်း၍ ထကြွမှု လုံ့လကြောင့် ရသော ဥစ္စာကို ရှေ့မှောက်ရောက်လာကုန်သောသူဖုန်းစားတို့အား ထမင်းအဖျော်ဖြင့် ရောင့်ရဲစေ၏”
“Hạng người mưa bố thí,
Những chúng sanh khốn cùng.”
Clouds ©Ashin Sopāka 2016
Posted in Dhamma	| Tagged compassion, dhamma, karuna
Posted on 22 Oct 2016 by Ashin Sopāka
“Going forth is hard, living at home is hard,
Dhamma is profound, and money is hard to come by.
Getting by is difficult for we who accept whatever comes,
So we should always remember impermanence.” – Thag 1.111
“Duppabbajjaṁ ve duradhivāsā gehā,
Dhammo gambhīro duradhigamā bhogā;
Kicchā vutti no itarītareneva,
Yuttaṁ cintetuṁ satata­ma­nicca­tan”ti.
“ရဟန်းအဖြစ်မည်သည် ပြုလုပ်ရန် ခဲယဉ်း၏၊ အိမ်တို့မည်သည် စိုးအုပ်၍နေရန် ခဲယဉ်းလှ၏၊
(ရဟန်းဖြစ်သောသူတို့ ထိုးထွင်းသိရမည့်) တရားသည် နက်နဲလှ၏၊
(ဤသာသနာတော်၌) ရတတ်သမျှဖြင့်သာလျှုင် အသက်မွေးခြင်းသည် ငါတို့အား ငြိုငြင်ဆင်းရဲလှ၏၊
သင်္ခါရတရားတို့၏ မမြဲသော သဘောကို အခါခပ်သိမ်း ရှုခြင်းငှါ သင့်လှ၏။”
“Việc xuất gia quả là khó, các căn nhà là nơi khó cư ngụ,
Giáo Pháp là thâm sâu, tài sản là khó đạt được,
sự nuôi sống chỉ với vật này vật khác (tùy thuộc vào sự phát sanh) là khó khăn cho chúng tôi,
điều thích hợp để thường xuyên suy nghĩ về tính chất vô thường.”
Green Billed Malkoha ©Ashin Sopāka 2016
Posted on 19 Oct 2016 by Ashin Sopāka
“And what, bhikkhus, is right effort? Here, bhikkhus,abhikkhu generates desire for the nonarising of unarisen evil unwholesome states; he makes an effort, arouses energy, applies his mind, and strives. He generates desire for the abandoning of arisen evil unwholesome states…. He generates desire for the arising of unarisen wholesome states…. He generates desire for the maintenance of arisen wholesome states, for their nondecay, increase, expansion, and fulfilment by development; he makes an effort, arouses energy, applies his mind, and strives. This is called right effort.” – SN 45.8
“Katamo ca, bhikkhave, sammāvāyāmo? Idha, bhikkhave, bhikkhu anuppannānaṁ pāpakānaṁ akusalānaṁ dhammānaṁ anuppādāya chandaṁ janeti vāyamati vīriyaṁ ārabhati cittaṁ paggaṇhāti padahati, uppannānaṁ pāpakānaṁ akusalānaṁ dhammānaṁ pahānāya chandaṁ janeti … pe … anuppannānaṁ kusalānaṁ dhammānaṁ uppādāya chandaṁ janeti … pe … uppannānaṁ kusalānaṁ dhammānaṁ ṭhitiyā asammosāya bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā chandaṁ janeti vāyamati vīriyaṁ ārabhati cittaṁ paggaṇhāti padahati—ayaṁ vuccati, bhikkhave, sammāvāyāmo.”
“ရဟန်းတို့ မှန်ကန်သောအားထုတ်မှု ‘သမ္မာဝါယာမ’ဟူသည် အဘယ်နည်း၊ ရဟန်းတို့ ဤသာသနာတော်၌ ရဟန်းသည် မဖြစ်ကုန်သေးသော ယုတ်ညံ့သောအကုသိုလ်တရားတို့ကို မဖြစ်စေရန်ဆန္ဒကို ဖြစ်စေ၏၊ အားထုတ်၏၊ လုံ့လပြု၏၊ စိတ်ကို ချီမြှောက်၏၊ ဆောက်တည်၏။ ဖြစ်ပြီးကုန်သောယုတ်ညံ့သောအကုသိုလ်တရားတို့ကို ပယ်ရန် ဆန္ဒကို ဖြစ်စေ၏။ပ။ မဖြစ်ကုန်သေးသော ကုသိုလ်တရားတို့ကို ဖြစ်စေရန် ဆန္ဒကို ဖြစ်စေ၏။ပ။ ဖြစ်ပြီးကုန်သော ကုသိုလ်တရားတို့ကို တည်မြဲစေရန်၊ မပျောက်ပျက်စေရန်၊ တိုးတက်ဖြစ်ပွားစေရန်၊ ပြန့်ပြောစေရန်၊ ပွားများမှု ပြည့်စုံစေရန် ဆန္ဒကို ဖြစ်စေ၏၊ အားထုတ်၏၊ လုံ့လပြု၏၊ စိတ်ကို ချီမြှောက်၏၊ ဆောက်တည်၏။ ရဟန်းတို့ ဤသည်ကို မှန်ကန်သောအား ထုတ်မှု ‘သမ္မာဝါယာမ’ဟု ဆိုအပ်၏။”
Plain Prinia ©Ashin Sopāka 2016
End of Vassa – Pavāraṇā – Abhidhamma Day
Posted on 16 Oct 2016 by Ashin Sopāka
Today marks the last day of Vassa, on which monks who have successfully completed the three month Rains will gather to atone for any offences they may have committed during the period. For the Burmese, this is also called Abhidhamma Day 1.
Buddha’s descent from Tāvatiṃsa
Posted in Abhidhamma, Monasticism	| Tagged abhidhamma, dhamma, pavarana